လမင်းခင်: အဖွဲ့ ချုပ် ဒုဥက္ကဌ ဘဘဦးကြည်မောင် ကွယ်လွန်ခြင်း (၇)နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကျွေးအလှူ နှင့် ဘဘအကြောင်း
အဖွဲ့ ချုပ် ဒုဥက္ကဌ ဘဘဦးကြည်မောင် ကွယ်လွန်ခြင်း (၇)နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကျွေးအလှူ နှင့် ဘဘအကြောင်း
(၂)မဲဆန္ဒနယ်၏ပြည်သူ့ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်
တွင် အရိုက်ခံခဲ့ရှု ဒ%်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့သူ တဦး
ဖြစ်ပါသည်။။ ဗိုလ်အောင်ကျော် ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်
လွန်းသဖြင့် လဲကျသွားရာအချိန်မှ ကွယ်လွန်သည်
အထိ အနီးကပ် ဖေးမပြုစု ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၄၁ တွင် ဘီအေနောက်ဆုံးနှစ်စာမေးပွဲ အား
၁၉၄၃ မှ ၁၉၄၅ ထိ ဂျပန်နိုင်ငံစစ်တက့သိုလ်တွင်
အပတ်စဉ် (၅၇) သင်တန်း ပြီးဆုံးသည် အထိစစ်
သင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့သည်၊ ၁၉၄၅တွင် ဗမာ့
သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း(သ န က ၅) သို့ ရောက်ရှိ
ပြီး ၁၉၄၈တွင် တပ်ရင်းမှူး တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့
သည်၊ ၁၉၅၁တွင် ထိုစဉ်က မေမြို့တွင်အခြေစိုက်
်သော မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌါနချုပ့်  စစ်ဦးစီး
ပထမတန်း တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်၊
၁၉၅၃တွင် တပ်မဟာ(၇) တပ်မဟာမှူး အဖြစ်
တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၅။၅၆တွင်
အမေရိကန် နိုင်ငံ စစ်တက္ကသိုလ်တွင်
၁၉၆၀ တွင် ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌါနချုပ် တိုင်းမှူး
အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်၊
၁၉၆၂ တွင်တပ်မတော်မှ နိုင်ငံတော်အာဏာ
သိမ်းယူစဉ် တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင်
အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသည်၊
၁၉၆၂ = ၆၃ တွင် အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌါန
ချုပ် တိုင်းမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူစဉ် စစ်တပ်နှင့်
နိုင်ငံရေး အခန်းက္ဂအား ကောင်းစွာခွဲခြား သိရှိသူ
တစ်ဦး ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ၁၉၆၂ စစ်အာဏာ
သိမ်းယူသည့် ကိစ္စအား အပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်၊
၁၉၆၃ တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီမှ ကြီးမှူးကျင်းပ
သည့် ဒူးယားနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို မတက်ရောက်ပဲ
အမိန့်အာဏာ ဖီဆန်ခဲ့ သဖြင့်အငြိမ်းစားပေးခြင်း
၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ကာလတွင်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ဖွဲ့စည်းသောအခါ
ဦးအောင်ကြီး ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့တွင်ပါဝင်လာပြီး
ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်သုတေသန ဌါနမှုး
အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါ သည်၊ နိုင်ငံရေး
လမ်းစဉ်ချင်း မတူညီကြ၍ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးအောင်ကြီး
အုပ်စု ခွဲထွက်ရာတွင် ဦးအောင်ကြီး. အဖွဲ့ ချုပ်
အပေါ်စွပ်စွဲချက်များကို လက်မခံပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်း
စုကြည် ဖက်မှ ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။။
ဦးတင်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖမ်း ခံခဲ့ရပြီးနောက် အဖွဲ့ချုပ်. ယာယီဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူ ခဲ့ပါသည်။။
၁၉၉၀ တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် ပါတီစုံအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အား မဲအပြတ် အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိအောင် ဦးဆောင်ခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး ဗိသုကာ}ကီး တဦး ဖြစ်ပါသည်၊ ကိုယ်တိုင်လည်း ဗဟန်း မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ရာ မဲရာခိုင်နှန်း (၇၃ . ၁၇)ဖြင့် အရွေး ချယ် ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။။
၁၉၉၀ပြည်ဇူလှိုင်(၂၈။ ၂၉)တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဂန္ဒီခန်းမ အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်အောင်ဦး ဆောင်နိုင်သူလည်း ဖြစ်သည်။။
ဂန္ဒီခန်းမအစည်းအဝေးပြီးနောက် စစ်အုပ်စုမှ ဖမ်းဆီး ခြင်းခံခဲ့ရသည်။။ ပုဒ်မ ၅ည နှင့်အစိုးရလျို့ ဝှက် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆(၂)ခနှင့် ၆(၃) အရပြစ်မှုထင်ရှားသည်ဟု စီရင်ခြင်း ခံရသည့် အပြင် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ ည နှင့်ငြိစွန်းသဖြင့်ပြည်သူ လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှပယ်ဖျက် ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ၁၉၉၁ ဒီဇင်ဘာ (၁၀)ရက်နေ့တွင်ကြေညာခဲ့သည်၊
ဦးကြည်မောင်သည် ၁၉၉၅ မတ်လ ၁၄ရက်နေ့တွင် အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လွတ်လာပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှာ ဇူလှိုင်လ ၁၀ရက်နေ့ တွင်ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာခဲ့သည်၊
၁၉၉၅ အောက်တိုဘာ ၉ ရက်နေ့တွင် အဖွဲ့ချုပ် အား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရာ ဦးကြည်မောင်အား ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့တွင် ဒုတိယဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခြင်းခံခဲ့ပါသည်၊
အပါတ်စဉ် စနေ တနင်္ဂနွေ ဟောပြောပွဲများတွင် စစ်အုပ်စုအား ပါးနပ်သော စကားလုံးများ။ ထိမိသော သုံးသပ်ချက်တို့ဖြင့်ထောက်ပြဟောပြော ခြင်းကို လာရောက် နားထောင်သော ပြည်သူ လူထုကြီးမှ ကျေနပ် အားရပြီး ဦးကြည်မောင်ရပ်တည်ချက် အပေါ် အားကိုး ယုံကြည်မှု
ကြီးမားအထူး လေးစားခြင်း ခံရသူလည်းဖြစ်သည်၊
မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များအား ခေါင်းဆောင်မှု နည်းပညာများကို ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံး. ခေတ်မှီ တိုးတက် မှုများနှင့်ချိန်ထိုးပြီးမှတ်သားဖွယ်ရာအတု ယူဖွယ်ရာများကို အချိန်နှင့် အမျှဆွေးနွေး သင်ကြားပြပေး နေခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။။ ထိုကဲ့သို့ မမောမပမ်းစတမ်း ဦးဆောင်လမ်းပြ ပေးသလို သူ ၀ါသနာ ပါသော ဂီတ အနုညာကိုလည်း လူငယ်များအား လေ့လာတတ်ကျွမ်း စေသည်။။
၁၉၉၆ တလျောက်လုံး ကြီးလေးသည့်ပါတီ တာဝန်များအပြင် အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနား။ လွတ်လပ် ရေးနေ့ အခမ်းအနားများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ နေ့ရော ညပါ မနားပဲ လူငယ်များနှင့်လက်ပွန်းတတီး အနီးကပ် ဦးဆောင်မှုပြုခဲ့သည်။။
၉။၁၁။၉၆ တွင်ကမ္ဘောဇရိပ်သာအ၀င်ဝနှင့် တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းတို့ တွင် ၂}ကိမ်တိတိ စစ်အုပ်စု. လက်ကိုင်ဒုတ် များမှ ဦးကြည်မောင် ။ ဦးတင်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့အား အသက်အန္တယ်ဖြစ်နိုင်သည့် လုပ်ကြံမှုကြီး နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် ဦးကြည်မောင်. ဦးခေါင်းနှင့် ပါးတွင် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရခဲ့သည်။။
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ မှစ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး ကာလ တလျောက်လုံးတွင် ဦးကြည်မောင် သည် စစ်အုပ်စု. မရားလုပ်ကြံမှု အကြိမ်ကြိမ်ခံရသည့် အပြင် ထောင်တွင့်း လေးကြိမ်တိတိ အကျဉ်းချ ထားခြင်း လည်း ခံခဲ့ရသည်၊
အကျဉ်းချခံရမှုများတွင် တပ်မတော်မှ အငြိမ်းစားယူပြီး နောက် ၂၅နှစ်တာကာလအတွင်း ထောင်နှစ်ကြိမ် ကျခံခဲ့ရပြီး ထောင်တွင့်း (၇)နှစ်နေခဲ့ရသည်။။
၁၉၈၈ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ ဖြစ်ဖြစ်ချင်း တတိယအကြိမ် တစ်လခန့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်၊
၁၉၉၀ စက်တင်ဘာလတွင် လေးကြိမ်မြောက် အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒါဏ်အနှစ် နှစ်ဆယ် ကျခံခဲ့ရသည်၊ ထောင်တွင့်း (၅)နှစ်နီးပါး နေခဲ့ရပြီး ၁၉၉၅တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက် ခဲ့ပါသည်၊ ဦးကြည်မောင်. နီုင်ငံရေး ဘ၀တလျောက်လုံး ထောင်တွင်း ၁၂နှစ်ခန့် နေခဲ့ရသည်၊ သို့သော် ဦးကြည်မောင်သည် ဘ၀နောက်ဆုံး အချိန် ဖိစီးလာသော ရောဂါဝေဒနာများ ဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ ခံရင်း စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းရေးနှင့် ခေတ်မှီ တိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက် နိုင်ရေးအတွက် မျိုးဆက်သစ်များအား လေ့ကျင့် ပျိုးထောင် ပေးခဲ့ပါသည်၊ သွေးလည်ပါတ်မှု စံနစ်ပျက်စီး၍သွေးကြော များမှ သွေးများ ဦးနှောက်တွင်းသို့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ ပေးပို့ အလုပ်လုပ်တော့သည့်အချိန်အထိ စာပေ သင်ကြား ပေးခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေးဗဟုသုတများ ပေးခဲ့ပါသည်၊
အဘက်ဘက်မှ ချွတ်ခြုံကျနေသည့် ကြားမှတိုင်းပြည် အတွက် ခံစားချက် စေတနာ တရားကြီးမားစွာ ရုန်းကန် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ၁၉။၈။၂၀၀၄မွန်းလွဲ (၁၂း၁၅) အချိန်တွင် ရွှေတောင်ကြား(၁)ရပ်ကွက် ကမ္ဘေဇရိပ်သာ လမ်းနေအိမ်တွင်ဘဘ ချစ်တဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့အဖိနှိပ်ခံပြည်သူ တရပ်လုံး အား ခွဲခွာသွားခဲ့ပါသည်၊
ခုနှစ်(ရ)နှစ်တာ ကာလ ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသော်လည်း ဘဘ ဦးကြည်မောင်. စေတနာ။ အနစ်နာခံမှု နှင့် စံပြ ဦးဆောင်မှုများ အားလုံး
မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များနှင့်လူထု တရပ်လုံးရင်ထဲတွင် လိုက်လိုက်လှဲလှဲ လန်းဆန်း နေမည်သာဖြစ်ပါသည်၊ ဘဘ ကဲ့သို့ ခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် ခေါင်းဆောင်တယောက် ဆုံးရှုံးသွားသည့် အတွက် နှမြောတသ ၀မ်းနည်းနေရင်း ဘဘမှာကြား ခဲ့သည့် ‘’လမ်းတခုလျောက်ရင် အဆုံးအထိလျောက်။ စေတနာ အရင်းခံပြီး သတ္တိ ရှိရှိလျောက် ရောက်ကို ရောက်မယ်” ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ဘဘတပည့်များ အားလုံး ဒီမိုကရေစီတည်းဟူသော ပန်းတိုင်သို့ အရောက် လျောက်လှမ်းပါ့မည်ဟု ကတိပြုအပ်ပါသည်၊ မြင့်မြတ်သည့်ဘုံဘ၀မှ ဘဘ သာဓုအနုမောဓနာ ခေါ်နိုင်ပါစေ။
Posted by LRDP at 8:02 AM
အဖွဲ့ ချုပ် အလံတော် ကို လွှမ်းခြုံ
အဖွဲ့ ချုပ် လူငယ် (အန်တီစုလုံခြုံ့ရေးလူငယ်) ကိုဘမေ...
အဖွဲ့ ချုပ် ဒုဥက္ကဌ ဘဘဦးကြည်မောင် ကွယ်လွန်ခြင်း (၇...
၀ိညာဉ်များနှင့် အတူ (ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်တော့မယ်...